Dareemida iyo Daalinta Spyware iyo Adware? - Cajiibka Ku Saabsan Talooyin Ku Saabsan Sida Looga Qabanayo Caafimaadkaaga Kumbuyuutarkaaga
Xadgudubka guud ahaan wuxuu loola jeedaa barnaamijyada casriga ah iyo barnaamijyada adware ee lagu xiro kombiyuutarada waxayna sababi karaan dhibaatooyin halis ah dadka isticmaala. Barnaamijyada noocan oo kale ah waxay bedeli karaan shabakadahaaga browser, sameynta boggaga internetka ee badalka ah iyo bedelida faylasha nidaamka.
Alexander Peresunko, Maareeyaha Guusha Macaamilka ee Semt Adeegyada Dijital ah, ayaa sheegay in inta badan kombuyuutarrada cudurka qaba ay muujinayaan qalab aan la garanayn oo aan la ogeyn iyo sidoo kale xayeysiisyo pop-up. Qalabka khatarta ah ayaa sidoo kale ku daraya bogaga internetka ee dhibta iyo nacaybka ah ee khaanadaada gaarka ah waxayna kugula talinayaan inaad xulato saacad kasta
Xayaysiin iyo faafin faafaahsan
Furaha iyo xayeysiisyada faafiyowga waa buuqa sida ay u burburiyaan kombuyuutarkaaga iyo shaqooyinkooda inta badan. Badbaadada badanaa waxay gashaa qalabkaaga kombuyuutarka iyada oo loo marayo piggybacks kuwaas oo laga soo duubay internetka tiro badan. Isticmaalayaasha kala duwan ayaa riixaya "Waan aqbalayaa" iyo "Waan aqbalayaa" badhkoodii si aan rasmiga ahayn iyadoon akhriyin heshiisyada liisanka muddada dheer. Isticmaalayaasha internet-ka ee xawaare-xawaare sare leh iyo kuwa xawaaraha sare leh waxay ku xayiraan fayrasyada iyo nacaybka sababtoo ah fahamka la'aanta diyaarrada la dhisay. Waa inaadan waxba ka soo qaadin kombuyuutarka adiga oon ogayn wax walba oo ku saabsan. Haddii kale, waa inaad la kulantaa dhibaatooyin, mana jiro antivirus si uu kuu badbaadiyo.
Haddii aad ka fekereyso nooca ilaalinta ee laga heli karo khayaanada, waa in aan kuu sheego inaad dhisi karto difaacaaga..Viruses iyo naceybku waxay helaan jidkooda si ay u galaan kombuyuutarkaaga; xitaa tiknoolajiyada iyo adeegyadda hogaaminaya ayaa kuguma badbaadin karan ilaa aad adigu qaadato tallaabooyin. Waa in aad falanqeeyaan taraafikada shabakadda oo aad xirto dhammaan daaqadaha aan la garanayn inta aad kuxirineyso bogagga aad jeceshahay Waa inaad sidoo kale leedahay bakhaar-hubiye iyo xannibaadyo fara badan oo aad ku ilaalisid si aad ugu badbaado internetka. Khabiirada teknoolajiga ayaa sheegaya in nalaga rabo inaan sii wanaajinno annagoo cusbooneysiineyno tarbiyeyaasheena iyo software laba goor bishii.
Bilihii ugu dambeeyay, ganacsiyada qaarkood waxay la tacaalayeen walaac badan oo khalad ah. Sidaa darteed, waxay doorteen in ay adkeeyaan siyaasadahooda waxayna waydiisteen shaqaalahooda inayan ka soo dejinnin barnaamijyada xajinta ee internetka. Waxay sidoo kale xakameynayaan shaqaalahooda inay galaan oo ay furaan boggaga internetka ee qaangaarka iyo qamaarka oo ay u badan tahay inay ku jiraan fayruusyo tiro badan. Hadafku waa in la ilaaliyo nidaamyadooda la ilaaliyo sanadka oo dhan. Shaqaalaha khayaanada nidaamkooda ayaa u badan inay ka baxaan ururka. Waxaa sidoo kale laga yaabaa inay bixiyaan magdhow si ay dadka kale u ogaadaan waxa mustaqbalka lagu qaban doono.
File Sharing Halista
Maalmahan, dadku waxay wadaagaan faylal fara badan oo kala duwan sida shabakadaha kala duwan sida Kazaa, iMesh, Morpheus, eDonkey, Grokster, Gnutella, iyo LimeWire. Wixii ganacsi ama ujjeedooyin shakhsiyadeed, markaad wadaagto faylasha waxaad feyreeyn kartaa fayrasyada iyo qalabaynta qalabka kombiyuutarka. Waa muhiim inaad ka fogaato soo qaadashada faylasha muusikada aan sharciga aheyn, cayaaraha video, software, iyo filimada. Khabiirada kombiyuutarku waxay sheegaan in aynaan soo dejinnin qalabka iyo barnaamijyada aan la ogeyn sababta oo ah waxay dhaawici karaan ama burburin karaan guryahayaga fikradaha habka ama kuwa kale. Tusaale ahaan, kuwa caadiyan ah in lagu soo rogo faylasha MP3 waa inay doortaan oo keliya bogag internet oo lagu kalsoonaan karo. Si aad u isticmaasho kumbiyuutarka caadiga ah, ma aha mid adag in la helo goobo ka mid ah warshadaha muusikada kuwaas oo labadaba user-friendly iyo computer-saaxiibtinimo. Spyware waa mid ka mid ah waxyaabaha soo saara ee wadaaga faylka isbarbar-dhigga. Isticmaalayaasha Internetka ma yaqaanaan sida looga takhaluso qalabka casriga ah ee qalabka ku duugaya maalin kasta. Habka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo waxay isticmaaleysaa boggaga internetka oo ammaan ah oo ammaan ah iyo kumbuyuutarkaaga oo dhan eegaya
bilood. Sida laga soo xigtay IDC, shaqaalaha ka shaqeeya in ka badan toddobaatan boqolkiiba ganacsiyada waxay isticmaalaan barnaamijyo fariin ah oo bilaash ah iyo macaamiil ah, kuwaas oo aan ku fiicnayn kombiyuutarkooda ama aaladaha gacanta Source .